भूकम्प पीडित नयनकुमारीको नाम कसले काट्‍यो ? पाइनन् अनुदान रकम, खुला अाकाशमुनी बस्‍न बाध्‍य — OnlineDabali
ओखलढुंगा । भूकम्पमा घर भत्केर खुला अाकाशमुनी पुगेकी पीडितले अहिलेसम्म तीन हजार मात्रै सरकारी अनुदान पाएको भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, यो वास्तविकता हो । सरकारी अनुदान नपाएर एक वृद्ध महिलाको बिचल्ली भएको छ ।
नयनकुमारीलाई परेको अन्यय कसले सुन्‍ने हो ? उनको नाम कसले काटेका हुन् ? यसको खोजी हुनुपर्छ । पीडित नयनकुमारीले पनि अरुले झैं सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।